Macluumaadka Booqdaha | Taageerada Fanka Columbus | Bandhig faneedka Columbus
Nagu soo biir dhanka hoose ee webiga ee Scioto Mile!
Juun 10, 11 & 12, 2022
11:00 am-10: 30 pm
10:00 am-10: 30 pm
10:00 am-5: 00 pm
Bandhiga Farshaxanka Columbus wuxuu u koray mid ka mid ah xafladaha fanka ee aadka loo ammaano ee qaranka!
Waxaanu soo bandhigi doonaa in ka badan 200 fanaaniin muuqaal ah, saddex marxaladood oo bandhigyo ah iyo daraasiin cunto iibiyayaal ah. Waxaa soo saaray shaqaaluhu iyagoo kaashanaya in ka badan 80 mutadawiciin ah oo sannadka oo dhan ah iyo boqolaal mutadawiciin ah oo usbuuca dhamaad ah, Bandhig faneedka Columbus wuxuu soo jiitaa fannaaniinta ugu sarreeya qaranka iyo sidoo kale kuwa xiiseeya fanka ee dalka oo dhan. Lacag dadweyne ma bixiso Bandhig Faneedka. Si kastaba ha ahaatee, xafladani waxay ahaanaysaa BILAASH sida had iyo jeer inaad ka soo qaybgasho, iyada oo ay ugu wacan tahay deeqahaaga, kharashka booska iyo kafaala-qaadayaasha badan ee xaflada!
Dhigashada agagaarka Scioto Mile aad bay u badan tahay! Waxaad ka heli kartaa mitir waddooyinka, isticmaal ParkMe, ama meel ka dhig mid ka mid ah garaashyada u dhow.
Dadka iinta leh boorarka baarkinka, meelaha baarkinka ee loo qoondeeyay ayaa laga heli doonaa dhanka waqooyi ee Mound St. galbeedka 2nd St., iyo dhanka bari ee Xarunta Madaniga ah Dr. inta u dhaxaysa Town St. iyo Broad St.
Gaadiidka Beddelka ah
Baaskiil: Sariiraha baaskiilka ayaa laga heli karaa webiga jiinkiisa, kaliya iska hubi inaad soo qaadato quful! Waad heli kartaa CoGo saldhigyada labada dhinac ee webiga: ee Beerta Bicentennial, COSI iyo Front St. oo u dhow Town St.
Bas: COTA Waxay u shaqayn doontaa adeegga baska si joogto ah loo qorsheeyay inta lagu jiro maalin kasta oo Bandhigga.
Bandhiga Farshaxanka Columbus waa meel fiican oo loogu talagalay dadka laakiin maahan xayawaanka rabaayada ah. Kuleylka iyo xaaladaha ciriiriga ah waxay ka dhigaan Bandhig Faneedka meel walaac leh oo laga yaabo inay noqoto meel aan caafimaad lahayn oo loogu talagalay saaxiibada xayawaanka. Waxaan sidoo kale jecelnahay xayawaanka rabaayada ah, taasina waa sababta aan kuugu weydiinayno inaad fadlan ku dhaaf kaaga guriga.
Buugga Hagaha & App-ka
Baro wax ku saabsan bandhigyada Bandhig faneedka sanadkan markaad socoto! Soo deji App-ka Bandhig faneedka Columbus iyada oo loo marayo dukaanka iTunes ama Google Play Store, oo ka hel buug hage mareegahaan, oo la heli karo xilliga gu'ga.
Haddii aad qorsheyneyso safar aad ku aado Columbus si loogu sameeyo Bandhig faneedka Columbus, waxaan rajeyneynaa inaad tixgeliso la-hawlgalayaasha hoteelada, Hotel LeVeque iyo Holiday Inn Columbus Downtown Capital Square. Fadlan hoos ka eeg faahfaahinta iyo isku xirka ballansashada.
Fadlan ogow, dhammaan baloogyada hoteelada waa kuwa ugu horreeya ee loo adeego marka ha lumin fursaddaada inaad qiimo gaar ah ka hesho lammaaneyaashayada hoteelka!
Qolalka ka bilaabma $149/habeenkii ee xirmada Khamiista, Juun 9-keeda ilaa Isniinta, Juun 13-keeda
Qiimaha la heli karo ilaa Khamiista, Meey 12-keeda, iyadoo ku xiran helitaanka
Qolalka ka bilaabma $129/habeenkii ee xidhitaanka Arbacada, Juun 8-deeda illaa Isniinta, Juun 13-keeda
Qiimaha la heli karo ilaa Arbacada, Meey 18-keeda, iyadoo ku xiran helitaanka
Faahfaahinta ka eeg tilmaamaha ku lifaaqan
Koodhka Kooxda: CAF
Bandhig faneedka, waxqabadyada farshaxanka gacanta lagu hayo ee carruurta, adigu magacaw! Jadwalka Hawlaha Bandhiga Farshaxanka Columbus waxa la soo dhejin doonaa guga.
Cunto weyn waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee Bandhig Faneedka Columbus, laga bilaabo barbecue dhadhan fiican leh ilaa tacos-aragoostada ilaa busyada kareemka jumbo. Waxyaalaha iibiya cuntada waxaa lagu dhawaaqi doonaa guga.